မသန်စွမ်းသူများနှင့် မူးယစ်ဆေး စွဲသူများအတွက် ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရေး အထူးဦးစားပေး ဆောင?? - Yangon Media Group
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများအနေ ဖြင့် မသန်စွမ်းသူများအတွက် အထူးဆောင်ရွက်ပေးနေသလို မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏ဘဝ ပြန်လည် ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက် အထူးဦးစားပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြောကြားသည်။ ဒီဇင်ဘာ၂၆ ရက်တွင် နေပြည်တော်၊ မင်္ဂလာသီရိဟိုတယ်၌ပြုလုပ်သော ASEAN Hometown Improvement Project National Workshop on Policy and Development အခမ်းအနားဖွင့်ပွဲတွင်ပြောကြားသော အမှာစကားတွင် ထည့်သွင်းပြောခြင်း ဖြစ်သည်။
”ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကို ပြန်ကြည့်ရင် ကလေးသူငယ်က စပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုအထိ ပြန် လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေ အကုန်လုံး ဆောင်ရွက်နေရတယ်။ အဲဒီအထဲမှာအရေးကြီးတာက မသန်စွမ်းတွေကိစ္စ၊ မသန်စွမ်းတွေ ကျတော့ အထူးဆောင်ရွက်ပေးရ မယ့်ကိစ္စတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် မသန်စွမ်းများ အတွက် စွမ်းဆောင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့က အလွန်အ ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ ကြောင့်မို့လို့ ရပ်တည်ဖို့အတွက် လည်း ဆောင်ရွက်ရဦးမယ်။ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ဖို့လည်းဆောင်ရွက်ရဦး မယ်။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာက စွမ်းနိုင်သမျှ စွမ်းအောင် စွမ်းအားစုတစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့လိုတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီစွမ်းအားစုက တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှု စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အ ထောက်အကူပြုမယ့် စွမ်းအားစု ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန် တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုတယ်။ ဒါကိုချန်လှပ်ထားလိုက်ရင် ကျွန်တော်တို့လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ စွမ်းအားစုတစ်ခုလိုအပ်မယ်။ ဒါမှ မဟုတ် လျော့သွားမယ်ဆိုရင် ကျွန် တော်တို့ရဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာ အဟန့်အတားရှိနိုင်တယ်”ဟု ပြည် ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်း မြတ်အေးက ပြောကြားသည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွင် လုပ်ငန်းကြီး(၁ဝ)ရပ်ရှိ ကြောင်း ဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် သန္ဓေတည်စအချိန်မှ သေဆုံးသည် အထိ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကိစ္စ၊ ကလေးသူငယ်ကိစ္စ၊ လူငယ်ကိစ္စ၊ အမျိုးသမီးကိစ္စ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲ သူများကိစ္စ၊ လူကုန်ကူးခံရသူများ ကိစ္စ၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားကိစ္စ၊ ကလေးစစ်သားကိစ္စများကို ဆောင် ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၃ဝ ရက်မှစတင် ပြီး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီး ဌာနဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီး ဌာနအနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးစွဲသူ များ၏ဘဝပြန်လည်ထူထောင်နိုင် ရေးအတွက် မူးယစ်ဆေးဝါးပြန် လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများကို ပြုပြင်ခြင်း၊ အသစ်တည်ဆောက် ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
”မူးယစ်ပြန်လည်ထူထောင်တာကတော့ အထူးဦးစားပေးအနေနဲ့ ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပါတယ်။ မူးယစ်ပြန်လည်ထူထောင် ရေးက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မူးယစ်ဆေးဝါးကို ထိထိရောက်ရောက်နှိမ်နင်းနေတယ်။ နောက်မူးယစ် ဆေးစွဲတဲ့လူတွေကိုလည်း မူးယစ် သံသရာကနေပြတ်ဖို့ အရေးကြီး တယ်။ ဒါကြောင့်မူးယစ်နဲ့ပတ် သက်တဲ့ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စခန်းတွေကို နဂိုရှိတဲ့စခန်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ ပြုပြင်မွမ်းမံတာရှိသလို အသစ်ပြန်လည်ပြီးတော့ လုပ်တာတွေရှိပါတယ်။ နဂိုရှိတဲ့ စခန်းတွေက ထိထိရောက်ရောက် ဆောင်ရွက်နိုင်တာ တော်တော် နည်းတယ်။ တော်တော့ကို နည်း နေတယ်။ အဲဒါကြောင့် တစ်ခုချင်း၊ တစ်ခုချင်းကို အခုမှစပြီး တော့ အခြေခံကစပြီးတော့ ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်၊ အဲ့ဒါကိုဆက် ပြီးတော့ ပြတ်အောင်လုပ်မယ်။ နောက်ပြီးတော့ မူးယစ်သံသရာ ပြန်မလည်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်။ အခက်အခဲတွေကိုဖော် ထုတ်ပြီး အဆင်ပြေအောင်ဆောင် ရွက်သွားမှာပါ”ဟု ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးလာဖြတ်သူများကိုလည်း ဥပဒေအတိုင်းမပြတ် သေးခင်သုံးရသည့်ပမာဏလောက် ကိုခွင့်ပြုထားပြီး ဖမ်းဆီးမည်မဟုတ် ကြောင်းနှင့် ဥပဒေ၏သတ်မှတ်ချက်ကျော်လွန်ပြီး ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုများပြုလုပ်ပါက ဥပဒေအရအရေးယူခံရမည်ဖြစ် ကြောင်း သတင်းထောက်များ၏မေးခွန်းများကို ပြည်ထောင်စုဝန် ကြီးက ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံဘက်မှ စစ်ဆေးရေးစနစ် အပြောင်းအလဲကြောင့် မူဆယ်(၁ဝ၅) မိုင်၌် ဖရဲသီးတင်ယာဉ်စီးရေ ၅?
ဒီမှာ အကုသိုလ် အရမ်းများသဖြင့် မတော်၍ တစ်ခုခုဖြစ်သွားလျှင် အပါယ်လားနိုင်သောကြောင့် နုတ်ထွ
ဒုတိယအကြိမ် ထရန့် – ကင် ဆွေးနွေးပွဲမှာ အမေရိကန်က ဘာတွေ လျှော့ပေးမလဲ၊ ဘယ်လို ဆွဲဆောင်မလဲ၊ ဒီေ
မြရည်နန္ဒာ တိုက်ခန်း ဝယ်ယူခွင့် မဲပေါက်ထားသူများအနက် အိမ်မြေပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စစ်ဆေးတွေ့??